सामाजिक सञ्जालमा नेताहरुः कसलाई कतिले पछ्याउँदै – Everest Times News
सामाजिक सञ्जालमा नेताहरुः कसलाई कतिले पछ्याउँदै
प्रविधिको विकाससँगै सामाजिक सञ्जाल व्यापक प्रयोगमा आएको छ । सर्वसाधारणदेखि नेता, व्यापारी, व्यवसायी, कलाकार र धनाढ्यहरुसमेत सामाजिक सञ्जालमा देखिन थालेका छन् । कलाकार , नेता र व्यवसायीले सामाजिक सञ्जाल आफ्नो मत, व्यवसाय र कला देखाउने डबलीका रुपमा लिन थालेका छन् ।
केही समययता पार्टीको महाधिवेशनको मुखमा, निर्वाचन नजिकिदाँ शीर्ष नेताहरुले पनि सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी आफुलाई सक्दो प्रचारमा लागेको देखिन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिदै गर्दा स्थानीयस्तरमा नेताहरुले पनि आफ्नो फलोअर बढाउन र प्रचारप्रसार गर्न सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा ल्याउन थालेका छन् । कांग्रेस महाधिवेशनताका सभापतिको प्रत्यासीद्वय शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेलले ट्वीटर र फेसबुकमा खाता बनाएर आफ्नो फलोअर बढाएका थिए ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्वीटरमा नेपालका शीर्ष नेताहरुको फलोअर कतिको छ र उनीहरु कतिको अपडेट छन् भन्नेबारे हामीले चर्चा गरेका छौं ।
फेसबुकमा को अगाडि ?
फेसबुकमा सबैभन्दा बढी लाइक नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा बाबुराम भट्टराईको रहेको छ । हालसम्म उनलाई १२ लाख ४५ हजार भन्दा बढीले लाइक गरेका छन् । उनी आफ्नो दैनिक गतिविधि र विचारलाई फेसबुक पेजमार्फत नै सेयर गर्ने गर्दछन् ।
उनीपछि फेसबुकमा लाइक धेरै पाउने नेताका रुपमा रविन्द्र मिश्र देखिन्छ । भर्खरै बिबिसिको जागिर छाडेर साझा पार्टी निर्माण गरी यसको संयोजक बनेका मिश्रको पेजमा ६ लाख २६ हजारभन्दा बढी लाइक रहेको छ । उनले पनि आफ्नो दैनिक अपडेट यही पेजबाट गर्छन् ।
मिश्रपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पछ्याउनेहरु धेरै छन् । प्रचण्डले उनको पेजमा एकलाख ६० हजारभन्दा बढी लाइक पाएका छन् । दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि उनी सामाजिक सञ्जालमा सक्रिया रुपमा देखा परेका हुन् ।
प्रचण्डपाछि स्वास्थ्यमन्त्री एवं कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गगन थापाको लाइक धेरै देखिएको छ । युवाहरुको प्रिय नेताका रुपमा चिनिने उनले फेसबुकमा एक लाख ३७ हजारभन्दा बढी लाइक पाएका छन् । थापाले पनि दैनिक अपडेट फेसबुकबाट नै गर्ने गर्दछन् ।
गगनपछि राप्रपाका अध्यक्ष एवं वर्तमान उपप्रधान तथा स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापा छन् । उनले फेसबुकमा झन्डै एकलाखको हाराहारीमा लाइक पाएका छन् । राप्रपामा युवाहरुको मन जित्न सफल नेता, हिन्दु राष्ट्र र राजतन्त्रको वकालत गर्ने उनलाई पछ्याउनेहरुले अध्यक्ष थापाको दैनिक अपडेट फेसबुकबाटै पाइन्छ ।
देशकै ठुलो पार्टी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा फेसबुकमा पछाडि नै देखिन्छ । उनले हालसम्म ८७ हजार हाराहारी मात्र लाइक पाएको देखिन्छ । अपडेटमा पछाडि परेकाले पनि उनी लाइकमा पछाडि परेको हुनसक्छ ।
यता देशकै दोस्रो ठुलो दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष र हाल संसदमा विपक्षी दलका नेताका रुपमा रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको फेसबुक लाइक ११ हजारमात्र रहेको छ । पछिल्लोपटक जनप्रिय काम गरी चर्चामा आएका ओलीबारे सामाजिक सञ्जालमा व्यापक बहस हुने गरेको छ । उखान टुक्का र कथाहरुमा निकै निपुण र भाषणकलामा एकदमै जोशिला ठानिने ओली सदाबहार चर्चित नेता भएपनि फेसबुकमा उनी आफै भने त्यति सक्रिया देखिदैनन् ।
ट्वीटरमा को अगाडि ?
फेसबुकमा झैं ट्वीटरमा पनि नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक बाबुराम भट्टराई नै अगि छन् । उनलाई ट्वीटरमा फलो गर्नेको संख्या सात लाख ६८ हजारको हाराहारीमा छन् ।
दलीय आधारमा निर्वाचन चिन्ह प्राप्त गर्न ऐन संशोधनको पहल गर्न सत्ताधारी दल नेका सभापतिलाई आग्रह! अध्यादेश जारी… http://fb.me/7WoG5sKDM
5:19 PM –5Apr 2017
उनीपछि ट्वीटरमा कांग्रेस नेता गगन थापा छन् । उनलाई ५ लाख ८० हजारभन्दा बढीले फलो गरेका छन् ।
आज दोस्रो दिन १३४५ जनाको नि:शुल्क परिक्षण उपचार र औषधि बितरण भयो। २६जनाको नि:शुल्क सल्यक्रिया समेत भएको छ। शिविर अझै ५ दिनसम्म संचालन हुनेछ।
चैत ८ गतेदेखि गौरमा संचालित सघन स्वास्थ्य सिविरमा २८५० पुरुष र ३२५४ महिला गरि ६१०४ जनाको परिक्षण भएको छ र १३० जनाको शल्यक्रिया भएको छ।
10:28 PM – 26 Mar 2017
थापालाई साझा पार्टीका संयोजक रविन्द्र मिश्रले पछ्याएका छन् । मिश्रलाई ५ लाख ६५ हजारभन्दा बढीले फलो गरेका छन् । त्यसपछि राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा छन् । उनलाई ३ लाख ३५ हजारभन्दा बढीले फलो गरेका छन् ।
जीवनका हरेक पक्षलाई सकेसम्म परोपकारसँग जोड्नु पर्छ भन्ने मान्यता अनुरूप कवितालाई परोपकारसँग जोड्दा यस्तो भयो!
9:28 AM – 15 Mar 2016
थापापछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा छन् । उनलाई २ लाख ४ हजारभन्दा बढीले फलो गरेका छन् ।
K P Sharma Oli @kpsharmaoli
जस्तोसुकै अवरोध र आक्रमण भएपनि एमालेलाई जनताको हृदयमा बस्नबाट रोक्न कसैले सक्दैन।@Hetauda.
4:33 PM – 10 Mar 2017
यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको ट्वीटर फलोअर ५० हजारको हाराहारीमा रहेको छ ।
☭ Comrade Prachanda
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको कार्यक्रम https://goo.gl/ZLHUnN
8:21 AM –6Apr 2017
देशकै ठुलो पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भने अहिलेसम्म ४६ हजारको हाराहारीले मात्र फलो गरेका छन् ।
देउवाले भने– चुनाव नहुने कुरै छैन, चुनाव हुन्छ, हुन्छ, हुन्छ !http://bit.ly/2n05lbH
7:08 PM – 20 Mar 2017
देउवाले भने– चुनाव नहुने कुरै छैन, चुनाव हुन्छ, हुन्छ, हुन्छ !
नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्धारित समयमा निर्वाचन हुनेमा शंका नगर्न आग्रह गरेका छन् । कांग्रेस मासिक पत्रिकाले पार्टीका पूर्व सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको…
व्यक्तिगत वेबसाइटमा ककसको ?
शीर्ष नेताहरुले व्यक्तिगत प्रोफाइल राख्न वेबसाइट पनि बनाएका छन् । अहिले वेबसाइटमा सबैभन्दा सक्रिया प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड देखिन्छ । सिएमप्रचण्ड डट कममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दैनिक कार्यक्रम र प्रधानमन्त्रीको दैनिक समाचार वेबसाइटमा अपडेट गराउँदै आएका छन् । कतिपय समाचार संस्थाहरु अहिले उनको वेबसाइटमा समाचारका लागि भर पर्न थालेका छन् ।
नयाँ शक्तिका संयोजक बाबुराम भट्टराई धेरैअघि देखि नै वेबसाइटमा सक्रिया छन् । उनको बाबुरामभट्टराई डटकम नामक वेबसाइट रहेको छ । अहिले उनले यस आफ्ना रचना, अन्तर्वार्ताहरु राखेका छन् ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्पा ओलीको केपीशर्माओली डटकम नामक वेबसाइट रहेको छ । उनको वेबसाइटमा हाल त्यति धेरै अपडेट गरेको देखिदैन ।
रविन्द्र मिश्रले आफ्ना कामहरुको बारेमा रविन्द्रमिश्र डटकममा अपडेट गरेका छन् । उनको वेबसाइट भने अंग्रेजी भाषामा रहेको छ ।
गगन थापाले हालै गगनथापा डटकम डट एनपी वेबसाइट सुरु गर्न लागेका छन् । देशकै ठुलो पार्टी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको भने नीजि वेबसाइट सञ्चालनमा देखिदैन । सामाजिक सञ्जालमा सक्रिया देखिएका राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाको पनि वेबसाइट देखिदैन ।